MWC ၂၀၁၃, HTC ငါတို့လက်ထဲမှာရှိသည် Androidsis
Francisco Ruiz | | Android ထုတ်ကုန်များ, HTC က, UHI
ကျနော်တို့ကနေဆက်လက် MWC 2013 အထူးသအတွက်ဘာစီလိုနာ၏ HTC ပြခန်း ကျနော်တို့ကနေ terminal ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိခဲ့တယ် မကြာသေးမီကလန်ဒန်၌ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်အဆိုပါ HTC One ကို.
လတ်တလောရက်သတ္တပတ်များအတွင်းစကားပြောရန်အရှိဆုံးပေးပြီးအသစ်ဖြစ်လာသည် မင်းသမီး ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီမှ၊ အမှန်တရားမှာ၎င်းသည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်ပစ္စည်းများတွင်သာမကအထူးသီးသန့်ဟာ့ဒ်ဝဲသို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများကိုမချွေတာခြင်းဖြစ်သည် interface အသစ် HTC Sense 5.
၏ interface အသစ်ဖြစ်သောဗီဒီယိုတွင်သင်မည်သို့မြင်နိုင်သနည်း HTC Sense နှင့် BlinkFeed ၏အံ့မခန်းနှစ်ခုဇာတိ applications များဖြစ်ကြသည် HTC က မင်စီးဆင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောဤစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ terminal တွင်ပြသခဲ့သည်၊ တစ်ချိန်ကဆိပ်ကမ်းများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များရှိသည့်ဆိပ်ကမ်းများနှင့်ခေါင်းဆောင်သောကုမ္ပဏီကြီးသည်ယခုလက်ရှိနည်းပညာ၏မီးမောင်းထိုးပြခြင်းသို့ပြန်သွားသည်။ HTC စိန်.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - HTC One ကိုလန်ဒန်တွင်တရားဝင်ပြသခဲ့သည်, BlinkFeed သည်လည်ပတ်မှုအတွက် ပို၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » MWC ၂၀၁၃၊ HTC One ၏ဗီဒီယို